नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रतिशेयर मूल्य ‘स्पलिट’ गरिदैं नेपालको पूंजी बजारको लागि नौलो घटना
काठमाडौं । नेपालकोे इतिहासमा पहिलो पटक एउटा कम्पनीको शेयरलाई दुई टुक्रा (स्पलिट) बनाई प्रति शेयर अंकित मूल्य घटाएर कारोबार गरिने भएको छ । ठूला पूंजी बजार भएका मुलुकमा शेयर टुक्राएर कारोबार गर्नु सामान्य भए पनि नेपालमा भने विसं २०५० मा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को स्थापना भएर औपचारिक रुपमा शेयर कारोबार शुरु भएयता अहिलेसम्म त्यसरी कारोबार भएको छैन ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले हाल कायम रहेको प्रतिशेयर अंकित मूल्य रू. १०० लाई घटाएर रू. ५० कायम गर्ने भएको हो । कम्पनीले आगामी माघ २८ गते हुने वार्षिक साधारणसभामा प्रतिशेयर अंकित मूल्य घटाएर लैजाने प्रस्ताव तयार गरेको छ । कम्पनीका संचालकहरु र अधिकांश ठूला शेयरधनीहरु त्यो प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेकोले साधारण सभाबाट त्यो पारित हुने लगभग निश्चित छ ।
आफ्नो कम्पनीको शेयर प्रति आकर्षित रहेका साना लगानीकर्ताको समेत पहुंच बढाउने उद्धेश्यले ‘अंकित प्रति शेयर मूल्य’लाई टुक्राउन लागिएको कम्पनीका एक संचालकले बताए । उनका अनुसार हाल कायम चुक्तापूँजी र बजार पूँजीकरणमा अन्य कुनै परिवर्तन नहुने गरी शेयर संख्या टुक्राउन लागिएको हो । दोस्रो बजारमा हाल कम्पनीको प्रतिकित्ता अन्तिम मूल्य रू. २ हजार ६८९ रहेको छ ।
शेयर खण्डिकरणको निर्णयसंगै बीमा कम्पनीहरूमध्येकै सर्वाधिक चुक्तापूँजी रहेको यस कम्पनीले हाल रहेको शेयर कित्ता दोब्बर हुनेछ । हाल कम्पनीको रू. ५ अर्ब ४९ करोड ६१ लाख ६० हजार ०० बराबरको ५ करोड ४९ लाख ६१ हजार ६० कित्ता शेयर सूचीकृत रहेको छ । साधारण सभाले पूंजीगत संरचना कुनै परिवर्तन नगरे पनि शेयरको खण्डिकरणपछि कम्पनीको सूचिकृति शेयरको संख्या ५ करोड ९९ लाख २३ हजार २१६ कित्ता हुनेछ ।
यसले गर्दा कम स्रोत भएका लगानीकर्ताको पनि कम्पनीको शेयर खरीदमा पहुँच पुग्ने विश्वास गरिएको छ । दोस्रो बजारमा सर्वाधिक रकमको कारोबार गरिरहेको यस कम्पनीको प्रतिशेयर अंकित मूल्य घटे पनि कारोबार अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्मरणरहोस उक्त कम्पनीले यसअघि पनि प्रतिशेयर अंकित मूल्य घटाउने प्रयास गरेको थियो । कम्पनी ऐनका केही प्रावधानहरुलाई कारण देखाउंदै नेप्सेले अनुमति दिन आनाकानी गरेपछि त्यो प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । कम्पनी ऐनमा पब्लिक कम्पनीको शेयरको अंकित मूल्य रू. ५० भन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा बढीका लागि वा १० अंकले भाग जाने त्योभन्दा बढी अंक हुन आउने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिमको रकम बराबर हुने उल्लेख छ । तर अहिले कम्पनी ऐनले पूंजी खण्डिकरण सम्वन्धि स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले यो प्रस्ताव अगाडि बढाई कार्यान्वयनको तयारी गरिएको कम्पनीका अधिकारीहरुको भनाई छ । नेपालमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये हाल सोल्टी होटेलको मात्र प्रतिशेयर अंकित अंकित मूल्य रू. १०० भन्दा कम छ । सोल्टी होटलको प्रतिशेयर अंकित मूल्य रू. १० रहेको छ ।